Intente eyolisayo kwizithandani.
Intente sinombuki zindwendwe onguGlamping
Ukucaphula iGlamping, iGlamping yindibaniselwano yamagama esiNgesi athi glamorous and camping, athetha ukukhempisha okutofotofo. I-glamping iya koyisa intliziyo yomntu wonke, iqinisekisa ukusondela kwindalo njengasententeni, kodwa kunye nokuthuthuzela kunye nokulula njengasehotele.
I-Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park ikhusela ezona ndawo zixabisekileyo zeStrzyżowskie kunye neDynowskie Foothills, zohlulwe ngumwonyo waseWisłok, izenza zifumaneke ngokufunda, ukhenketho kunye nokuzonwabisa.
Ukuze kukhuselwe imiphumo eyingozi yezinto zangaphandle kunye nokukhusela amaxabiso obuhle bomhlaba, indawo ye-buffer yadalwa ejikeleze iPaki, oko kukuthi indawo yokukhusela enendawo yeehektare ezingama-34,074.
Indawo yeCzarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park ikwiphondo leWestern Carpathians, kumazantsi eStrzyżowskie Foothills kunye nenxalenye esemazantsi-ntshona yeDynowskie Foothills eyahlulwe kuyo yintlambo yaseWisłok. Ubukhulu becala luphawu lweenduli, zombini ngokunxulumene neendawo ezisemantla eDynowski kunye neStrzyżów Foothills, kwaye ngakumbi ngokucacileyo ngokunxulumene neJasielsko-Krośnieńska Basin kwicala elingasezantsi. Eyona nduli inkulu ebekwe kwiPaki - iSucha Góra, i-585 m ngaphezu komphakamo wolwandle, iphakama ngaphezulu kwe-300 m ngaphezu kwe-Jasielsko-Sanockie Doły.
Uluhlu oluphambili lweenduli zePaki, ezihlala kwiiNtaba zeCarpathian ukusuka emantla-ntshona ukuya kumzantsi-mpuma, ziqala ukusuka entshona kunye nodonga oluqhekekileyo lweKlonowa Góra (525 m ngaphezu komphakamo wolwandle), Barda (534 m) kunye I-Chełm (528 m). Emva koko yehla kancinci kwaye iye ngaseWisłok - owona mlambo mkhulu kwiPaki. Emva komwonyo onomdla obizwa ngokuba yi "Frysztacka Gate" sinothotho lwezona nduli zintle kakhulu, ngokuthe ngcembe zinyuka, ezizezi: Herby (469 m) kunye neCzarnówka (491 m), ezinxibelelana neengqumba ezimbalwa ezisezantsi kunye neKrólewska Góra (554 m) kwaye yahlulwa kulo yi-Czarny Valley Suchą Góra Stream (585 m). Ukusuka kumqolo wayo, uluhlu oluncinci lwamahlathi, oluthweswe isithsaba seCzosnki (476 m), iKopce (484 m) kunye neGrudna (479), ibaleka kumntla-mpuma ukuya kwintlambo yaseStobnica. Kumantla eSucha Góra massif, kukho, ngokulandelelanayo, iinduli ezimfutshane, ezisecaleni zeCzarny Dział (479 m kunye ne-516 m) kunye neBrzeżanka (477 m).
Ummandla wePaki ukwiyunithi enkulu yejoloji ebizwa ngokuba yiFlysch Carpathians, eyathi yenziwa ngexesha leAlpine orogeny. Kwi-geological substrate kukho amatye avela kwiCretaceous (Mesozoic era) kunye neTertiary (Cenozoic era) amaxesha, enza into ebizwa ngokuba Carpathian flysch. Lawa ngamatye entlabathi ahlukeneyo okuchasana, udongwe, i-shales yodongwe, i-marls kunye ne-conglomerates zicwangciswe ngokuhlukileyo. La matye abumba uluhlu oluninzi olunokwakheka okungafaniyo, okuthe phantsi kwempembelelo yoxinzelelo lwemikhosi ye-orogenic yasongwa kwaye yatyhalelwa emantla ngendlela yeengubo ezinkulu kwiindlela ezenziwe ngaphambili. Kukho uchungechunge oluthathu lweCarpathian flysch ewela enye kwenye kwindawo yepaki - iSilesian, iPodlaski kunye neSkolska napkin, echaphazela ukuhlukahluka kobume bejoloji kule ndawo.
Isakhiwo se-geological sinxulumene nenkqubo yeenduli zeenduli, iimpawu ze-flysch foothills, ezihlukaniswe ngamadakumba anqunywe yimijelo yemilambo kunye nemilambo. Owona dederhu luphakamileyo lwalo mmandla lubhekiselele kwelona nqanaba liphezulu lentaba elinamathambeka angumnqantsa, ahlala encamini. Ukongeza kwiintaba zeentaba, kukho iindawo ezibanzi zokudakumba, ukudala indawo ye-flat humps kunye ne-slopes ye-5? I-15 degree slope kunye ne-hollow, iintlambo ezihlala zimcaba. Uphawu lukwakukwenziwa kunye nokugcinwa kweeequations ezipakishweyo, njengakwimeko yoluhlu lweKlonowa Góra, oluthi, emva komwonyo waseWisłok, lujike lube kuluhlu lweJazowa. Amaqela amatye avela kweli bhanti ethafeni aneemeko ezahlukeneyo zokukhululeka kwaye avela ngendlela yeendawo ezizimiyo ezikhululekileyo ezinemilo yokuqala. Lo mtsalane womhlaba ubalulekileyo ukhuselwe yi "Herby" yehlathi-geological reserve. Icandelo elidumileyo nelibonakalayo leenduli zeenyawo, nangona kunjalo, ngamatye anqabileyo e-sandstone e-fanciful shapes enwebeka enyakatho ye-Krosno, ehlanganiswe kwi-geological reserve "Prządki" kunye kufuphi nenqaba yaseKamieniec e-Odrzykoń.
Amaqela amaninzi amatye afumaneka kwi-Pietrusza Wola, Łączki Jagiellońskie kunye ne-Wola Komborska, apho enye yamatye e-cap-shaped ibizwa ngokuba yi "Confederate" kwaye iphantsi kokhuseleko njengesikhumbuzo sendalo. Ukwakheka kwamatye okukhankanywe ngasentla kwenzeka ikakhulu kwiincopho zeenduli. Lawa ngamatye ahlelwa njengeefom ze-denudative, eziveliswe kwinkqubo yokunciphisa iincopho kunye nokuhlehla kwemithambeka. Kukho iifom ze-slope ngendlela yeepulpiti, iindonga kunye nemibundu.
Ubukho bemiqolomba yemvelaphi yetectonic bungqina ubume bejoloji obahlukeneyo bommandla wePaki. Ezona zidumileyo zifumaneka kufutshane neKrólewska Góra.
Ngokulandelayo, kwithambeka elisemazantsi e-Sucha Góra, kukho imitsi eliqela efana nomqolomba, eyenziwe ngenxa yokusetyenziswa phantsi komhlaba kwelitye lentlabathi.
Indawo yePaki kunye nendawo yayo ye-buffer ilele kwindawo yeCarpathian ecoclimatic kwi-foothill macroregion. Le mozulu, xa ithelekiswa neyo yonke iPoland (ngaphandle kweeSudetes), ipholile kwaye ifumile. Ineempawu zemozulu yentaba, ebonakaliswa ngokuhla kweqondo lokushisa lomoya kunye nokunyuka kwemvula kunye nokuphakama kokuphakama ngaphezu kolwandle.
Ubutyebi kunye neentlobo ezahlukeneyo zezilwanyana zehlabathi kwi-Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park ixhomekeke kwindawo ethile, iqondo eliphezulu lendalo yezityalo emahlathini, ubukho bamadlelo kunye namadlelo, kunye nemo yendalo yezityalo zezolimo kunye nokutyalwa. namatyholo endle.
Indawo yePaki ikumda osemantla wokuvela kweentlobo zeentaba kunye nomda osemazantsi woluhlu lweentlobo eziphantsi komhlaba, ngoko ke ukungena kwabo kunye kunye nokutshintshwa kwabo kubonakala.
Ihlabathi lezilwanyana ezingenamqolo limelwe ikakhulu zizinambuzane, kuquka nomntanezulu onqabileyo othandazayo. Malunga neentlobo ezingama-225 zezilwanyana ezinethambo lomqolo, kuquka neentlobo eziyi-119 zeentaka, iintlobo ezingama-49 zezilwanyana ezanyisayo, iintlobo ezingama-35 zeentlanzi, iintlobo eziyi-16 zezilwanyana ezihlala emanzini nasemanzini kunye neentlobo ezi-6 zezilwanyana ezirhubuluzayo, zizala apha ngokwemvelo. Phakathi kweentaka, ezibaluleke ngakumbi zintlobo ezigqunywe kukhuseleko lweendawo zokuhlala, ezifana nengwamza, ukhozi olunamachokoza amancinci kunye nesikhova. Kuyaphawuleka ubukho bezinye iintlobo ezixabisekileyo ze-avifauna, ezimelwe, phakathi kwezinye: i-honey buzzard, i-corncrake, i-Ural owl kunye ne-white-backed woodpecker. Phakathi kwezilwanyana ezincancisayo, iintlobo ze-9-10 zamalulwane ziye zaphandwa kakhulu kwaye zichazwe. Indawo yePaki ikwahlala: iinyamakazi, ixhama elibomvu, ihagu yasendle, ibeaver, ibheji, iotter, ibeech marten kunye nepine marten.
Inxalenye ebalulekileyo yezilwanyana ze-Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park zizinto eziphilayo eziphantsi, zihlala zisenzeka ekuhlaleni, eziyinxalenye yeqela elisemngciphekweni wokuphela.
Phakathi kwezilwanyana ezingenamqolo, oku kulandelayo kuyaphawuleka: i-mantis ekhankanywe ngasentla, i-alpine capricorn, i-capricorn enkulu, i-stag beetle, ibhere ebomvu, i-mantis kunye nomatiloshe. Izilwanyana ezinomqolo ezixabisekileyo zezi: rose hawk, Kessler's gudgeon, chafflower, great crested newt, Carpathian newt, inyoka egudileyo, ukhozi olunamachokoza amancinci, isikhova, isikhova, isiqongqothwane esiluhlaza, umthi omhlophe, ihudube, ihobe, ebusuku, ingobozi, dormice, kunye izibawu yaseYurophu. ermine Bechstein kaThixo.
KwiPaki yaseCzarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park, iindidi ezingama-217 zezilwanyana ezikhuselwe ngokusemthethweni ePoland ziye zafunyanwa zaza zabhalwa ngoku, kuquka iintlobo ze-134 zeentaka, iindidi ezingama-26 zezilwanyana ezincancisayo, iintlobo ezi-6 zezilwanyana ezirhubuluzayo, ezili-16 zezilwanyana ezihlala emanzini kunye neentlobo ezi-5 ezikhuselweyo zeentlanzi. .
Iintyatyambo zezityalo ze-vascular ze-Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park zibandakanya ngaphezu kwe-800 yeentlobo. Iintlobo zeentaba zenza malunga ne-7.5% yazo zonke iintyatyambo zePaki. Indima ebaluleke kakhulu kwiqela lezityalo zeentaba idlalwe ziintlobo zeentaba ezinxulumene nehlathi leentaba. Iintlobo zezityalo ezikwintaba ngokubanzi ezifumaneka kwiileya ezahlukeneyo zezityalo azininzi kakhulu. Akukho ntlobo ze-subalpine. Iqela leentlobo ze-submontane, eziqhelekileyo kwinqanaba leenduli, liqukethe kuphela i-5 taxa. Uluhlu lwezityalo ze-xerothermic (thermophilic) ziintlobo ze-125 (malunga ne-15% yezityalo ezipheleleyo). Le paki ineentlobo ezingama-64 ezikhuselweyo, kuquka ezingama-48 ezikhuselwe ngokupheleleyo nezili-16 ezikhuselweyo ngokuyinxenye. Phakathi kwazo, ezi zilandelayo zifanelwe ingqalelo ekhethekileyo: imifanekiso ye-alpine, i-ostrich plume, ulwimi lwase-Eurasia, i-French rose, i-squill eqhelekileyo, i-tuft yasezantsi kunye ne-yew.
Iintlobo ezihamba nabantu (iintlobo ze-synanthropic) zenza malunga ne-20% yezityalo zale paki (iintlobo ezili-177). Phakathi kwazo kukho izityalo zomthonyama, izityalo ezidala ezikhapha umntu kangangamawaka eminyaka, ezisandul’ ukufika ezinembali eyaziwayo yokusasazeka, kunye neentlobo ezisuka kwizityalo nezisekho kufuphi nalapho zatyalwa khona.
Phakathi kohlaza olungelulo olwamahlathi, uluntu olunesimo sendalo ngokupheleleyo kunye nemvelaphi lumbalwa, oluthi luvele, luqhubekile kubume belizwe kwaye luphinde ludale ngaphandle kokungenelela komntu. Ungabala apha amatyholo kunye ne-wicker efunyenwe kumatye asecaleni lomlambo kunye nezityalo zezityalo zentaba. Ezo ndawo zokuhlala ziquka, umzekelo, amatye asecaleni komlambo nangaphaya kwemijelo, imigxobhozo kunye nokuhamba kwamanzi. Izityalo ze-herbaceous ze-butterbur kunye ne-horsetail eziphuhliswa apha zingathathwa njengendalo ngokupheleleyo. Ezinye iziqwenga zezityalo ezisezantsi ze-peat bog zisenokuba nezemvelaphi kunye nesimilo sendalo, umzekelo, iihamile ezisezantsi ezinoboya. Inxalenye enkulu yoluntu lwezityalo ze-herbaceous isondele kwindalo. Eli qela libandakanya inxalenye ebalulekileyo yeerushes, izityalo zohlobo lwemeadow-type herbaceous rush, i-meadowsweet-geranium herbage, uluntu lweminti enamagqabi amade, idlelo lesilika kunye noluntu olunengcongolo yesanti.
Uhlaza olungelulo olwamahlathi lufumaneka malunga ne-55% yommandla, kubandakanywa ngaphezu kwe-2/3 yazo zonke iindawo zezityalo kunye noluntu olukwinqanaba elifanayo le-phytosociological elifumaneka kwipaki. Ngoko ke, kufuneka kugqitywe ekubeni iindawo ezingezizo ezamahlathi zibaluleke kakhulu kulondolozo lweendawo ezihlala abantu abaninzi abangxameleyo, bezityalo, i-peat bog, ingca, amadlelo namadlelo. Ezi zakhiwo ziyindawo ephambili kwinani elikhulu lezityalo ezinqabileyo, ezisengozini kwaye zikhuselwe ngokusemthethweni, umzekelo, iintlobo zentsapho ye-orchid. Iindawo ezihlala iintyatyambo ezihlala kumathafa engca, amadlelo kunye nezityalo zemithi ziphawulwa zizilo ezixabiseke kakhulu zezilwanyana ezingenamqolo (ingakumbi izinambuzane), ezityebe ngamaxesha amaninzi xa zithelekiswa nabahlali bamahlathi.
Ukukhuselwa koluntu olungengawo amahlathi luqinisekiswa ngokugcinwa kweendlela zemveli zokulima, ngakumbi kumadlelo namadlelo.
Indawo ye-Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park kumda weMpuma kunye neNtshona yeCarpathians kunye nokwahlukana okubalulekileyo kweemeko zemozulu kuqinisekisa ukutyeba kunye nokwahlukana kwezityalo ezigubungelayo, kuquka ukugquma kwehlathi. Uluntu lwamahlathi endalo kwiPaki lugubungela malunga ne-79.8% yendawo yehlathi. Kwi-geobotanical sub-district of the Strzyżowsko-Dynowskie Foothills, inxalenye yayo ebandakanya iPaki, kukho imigangatho emibini yezityalo: iinduli kunye nomgangatho ophantsi wehlathi (isabelo malunga ne-7% yendawo yehlathi).
Ezona ndawo zibalaseleyo zamahlathi ommandla osezantsi we-montane zezi: ihlathi elichumileyo le-Carpathian beech ngendlela yentaba yeentaba kunye ne-acidic beech yeentaba. Malunga ne-11.3% yendawo yamahlathi ePaki ihlalwa luluntu lwefire echumileyo ehambelana ikakhulu neendawo ezingabizi kakhulu zamathambeka kunye ne-inter-ridge flatten kumbindi nasemzantsi-mpuma wePaki. Ihlathi lehlathi le-oki-hornbeam ligubungela i-15.7% yendawo yamahlathi epaki. Iintlambo zomlambo zidibene ne-riparian phytocoenoses emelwe yi-assemblages: ihlathi le-ash-alder kunye nehlathi le-submontane ash, uluntu oluphakathi phakathi kwala maqela, kunye neqela elinqabileyo kakhulu leentaba ze-alder alder. Uluntu lwaselunxwemeni lugubungela malunga ne-1.4% yommandla wamahlathi. Amabala eentakumba engumgxobhozo ezenzeka kwiindawo ezixineneyo zomhlaba zibaluleke kakhulu. Uluntu oluphuhliswe kwimihlaba yangaphambili yezolimo, kunye nokugqwesa kwemithi yepine, ibonisa ngokucacileyo isabelo sabo.
Umbuki zindwendwe ngu- Glamping